Mahila Swasthya गर्भपातपछि कसरी सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने ?
गर्भपातपछि कसरी सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने ?
आइतबार, वैशाख ५, २०७८ महिला स्वास्थ्य
दम्पतीबीच एक किसिमको उमंग छाउँछ, जब गर्भधारणको संकेत मिल्छ। उनीहरु रोमाञ्चित हुन्छन् । यसरी सुनियोजित ढंगले गरिने गर्भधानपछि घर परिवारले खुसी मनाउँछन् । दम्पतीको काम, व्यस्तता, आर्थिक अवस्था सबै कुरा ख्यालबिचार गरेर गर्भधारण गर्ने गरिन्छ । यसरी गर्भधारण गरेपछि अनावश्यक वा अप्रत्यासित झन्झट व्यहोर्नु पर्दैन ।
तर, दुखी हुनुपर्ने वा चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने कारण पनि होइन यो । एक पटक गर्भपात हुँदैमा अर्को पटक त्यसको विकल्प सुरक्षित रहँदैन भन्ने होइन । गर्भ रहन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया कहिले थाल्ने रु
जब गर्भपात हुन्छ, अक्सर महिलामा तनाव हुन्छ । उनीहरुको दिमागमा के कुरा आउँछ भने ‘के दोस्रो पटक आमा बन्न सकिएला रु दोस्रो पटक पनि गर्भपात हुने भयो भने रु यसका साथै सबैभन्दा जरुरी प्रश्न त सेक्स लाइफ के हुनेछ भन्ने आउनसक्छ ।
गर्भपातपछि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता के हुन्छ भने कुनैपनि संभावित संक्रमणबाट बच्नका लागि गर्भाशय अर्थात सर्भिक्स बन्द हुनुपर्छ । अक्सर गर्भपातपछि, भ्रुण निस्कनका लागि गर्भाशय खुला हुनुपर्छ र गर्भाशय बन्द हुने क्रम गर्भधारणपछिको सप्ताह वा अवधीमा निर्भर गर्छ । यसकारण सर्भिक्स बन्द हुनका लागि केही सप्ताह वा महिना पनि लाग्न सक्छ । केही परिक्षणबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ कि, तपाईको गर्भाशय बन्द भएको छ । र, अब यौन जीवन सुरु गरे हुन्छ ।
गर्भपातपछि यौन सम्पर्क कहिले गर्ने त रु यसका लागि शारीरिक मात्र होइन भानावत्मक रुपले पनि तयार हुनुपर्छ । यौन सम्पर्कका लागि कम्तीमा तीन महिना पर्खनुपर्छ । यस अवधीमा आफ्नो शरीरमा क्षय भएको फोलिक एसिड र शारीरिक शक्ति बढ्न सक्छ । यस समयमा गर्भपातपछि बनेको थाइराइड वा इन्सुलिनको जाँच पनि गर्न सकिन्छ । यसपछि आवश्यक परेमा चिकित्सकसँग पनि परामर्श लिएर गर्भधारणका लागि तयारी गर्न सकिन्छ । एजेन्सी
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ५, २०७८
यौनागंको सरसफाईलाई प्रथामिकतामा राख्न जरुरी !
विवाहपछि यौन चाहना दोब्बर बढाउन लाई के गर्ने ?
सपनामा यौन सम्पर्क देख्नु स्वस्थकर !
सम्भोग गर्ने इच्छा महिला या पुरुष कुनमा बढी हुन्छ ?